रोजगारीको प्रलोभनमा हरेक वर्ष ठगिन्छ ५० करोड, ठगिने जोखिम हुँदाहुँदै पैसा दिन्छन् कामदार Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौं : भिजिट भिसामा गएर काम गर्न पाउने आशामा बर्दियाका गोविन्दबहादुर चन्द मंसिर २१ गते दुबई उडे। उनले दिएको जाहेरी अनुसार अनुसार आफ्नै साथी तेजप्रसाद लामिछानेले उनलाई भिजिट भिसामा दुबई पठाएका थिए।
लामिछाने आफू म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने यसरी र थुप्रै मान्छे पठाइसकेको बताउँथे। आफूले पठाएको मान्छेले धेरै राम्रो कमाइ गरिरहेको र १८ सय दिराम (दुबई मुद्रा) मासिक आम्दानी हुने उनले बताएका थिए।
लामिछानेले विदेश जान ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताए। चन्द कन्भिन्स भए। उनले जाहेरीमा भनेका छन्, ‘कमाइ राम्रो भएको र कमाएर ऋण पनि चाँडै तिर्न सकिहालिन्छ भन्ने सोचेर लामिछानेमार्फत वैदेशिक रोजगारमा दुबई जान तयार भएको हो।’
चन्दले तत्काल ३ लाख ५० हजार लामिछानेको एनआइसी एसिया बैंकको खातामा जम्मा गरिदिए। पुस २१ गते दुबई उडेका उनलाई दुबईको एयरपोर्टमा एजेन्ट लिन आए। २९ दिनसम्म होटलमा राखे। तर यता गफ दिए जस्तो सहज थिएन काम पाउन। काम लगाउन नसकेपछि उनलाई पुस २२ गते नेपाल फर्काइयो।
चन्द मात्रै होइन भिजिट भिसामा दुबई पुर्यानइनेमा सिन्धुपाल्चोकका मदन पराजुली र ध्रुव राना थिए। उनीहरु पनि त्यसरी नै ठगिए। उनीहरुले राजीव न्यौपाने विरुद्ध जाहेरी दिए वैदेशिक रोजगार विभागमा।
पराजुली र रानाले न्यौपानेको खातामा २ लाख ७० हजारका दरले ५ लाख ४० हजार माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएका थिए। नोभेम्बर ११ तारिखमा दुबई उडेका उनीहरुलाई न्यौपानले ड्राइभरको माग भएको र २ हजार ५ सय दिराम मासिक आम्दानी हुन्छ भनेर दुबई गएको बयान दिएका छन्।
दुबई पुगेपछि एजेन्टले नेपालबाट २ सय ५० डलर एजेन्टले लिएर होटलमा ३७ दिनसम्म राखेका थिए। ३७ दिनसम्म पनि काम लगाउन नसकेपछि उनीहरुले ३६ हजार मागेर नेपाल फर्काइदिए। अहिले उनीहरु न्याय चाहियो भन्दै विभाग धाइरहेका छन्।
ग्राफ बढेको बढ्यै
विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४३ म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएकाहरुको उजुरी परेको छ। म्यानपावरबाट ठगी पर्नेहरुलाई विभागले धेरैलाई सम्झौता गरेर रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यस्तै व्यक्तिबाट ठगीमा पर्नेमा गत वर्ष ४ सय ३१ जनाको ३४ करोड ५८ लाख ७ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको उजुरी परेको थियो। जसमा अदालतमा मुद्दा दायर संख्या १ सय ५ को मात्रै छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ७ सय ६९ जनाले आफू ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन्। जसको कुल रकम ५३ करोड ८२ लाख १३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको देखिएको छ।
अदालतमा भने १ सय ४३ जनाको मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ। ठगिने संख्या धेरै देखिए पनि किन उजुरी संख्या कम देखिएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सी तथा व्यक्ति विरुद्ध मुद्दाभन्दा पनि डुबेको रकम उठाउनतर्फ जोड हुने भएकाले कम मुद्दा दर्ता भएका हुन्।
विभागमा हरेक वर्ष ५० करोड माथिको रकम वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी हुने गरेको देखिन्छ। हरेक वर्ष ठगीको रकम बढिरहेको छ। तर ठगीको संख्या कम भने भएको छैन। यसको पहिलो कारण जसरी पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको बढ्दो संख्या नै हो।
पहिला वैध/अवैध जसरी पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने अनि पछि रकम फसेपछि मात्रै कानुनी उपचारको बाटो खोज्नेहरु धेरै देखिन्छन्। फ्री भिसा फ्री टिकट भएको देशमा समेत म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टले मागे अनुसारको रकम बुझाउन राजी हुने, एजेन्टले जे भन्यो त्यही पत्याउने अनि उनीहरुको कानुनी आधार छ/छैन केही नहेर्दा धेरै नेपालीहरु रोगजारीको प्रलोभनमा फस्ने गरेको देखिन्छ।
केही दु:खै पाएर पनि उतै टिक्न सक्छन्। केही कामै नपाएर अलपत्र भएर स्वेदश फर्कन्छन् भने केहीले त ज्यानै गुमाउँछन्। अवैध रुपमा विदेश गएकाले ज्यान गुमाउनेहरुको शव स्वदेश फर्काउन समेत सकिन्न।
भिजिट भिसा भनेको काम पाउने भिसा हैन। त्यो घुम्न जान पाउने अनुमति हो। तर धेरैले यो चाल पाएर पनि कतै काम पाइहालिन्छ कि भनेर लोभिँदा एजेन्टहरुको फन्दामा पर्ने गरेको देखिन्छ।
'भिजिट भिसामा गएपछि काम गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा छ। त्यो थाहा भई-भई धेरै पैसा किन दिने? कामदारको पनि कमजोरी देखिएको छ,' महानिर्देशक पौडेलले भने, 'सजिलै कन्भर्ट गरिदिने भन्दैमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएर पछि वर्किङ भिसामा कन्भर्ट गरिनु हाम्रो लागि गैरकानुनी हो।'